Mayelana NATHI - Nanchang Lijinghui Trading Co., Ltd.
INanchang Lijinghui Trading Co., Ltd
Sasungula ngo-2014 futhi ifektri iqala ngo-2007;
Ifektri esinayo mayelana no-2000-3000M³Where etholakala esifundazweni saseNanchang City JiangXi ngokufinyelela okulula kokuhamba.
Isikhathi sokusungulwa kwenkampani
Isikhathi sokusungulwa kwefektri
Inani labasebenzi benkampani
Inkampani ekhethekile kuMkhiqizi nokuthekelisa zonke izinhlobo zezingubo zokuluka; Imikhiqizo yethu eyinhloko i-T Shirt, i-Polo Shirt, i-Hoody Sweatshirt, i-Kids Clothing, i-Tank top, i-Sports Wear nezinye izesekeli zezingubo.
Senza ikakhulukazi ama-oda we-OEM ne-ODM, i-oda lesilingo elincane (i-MOQ ephansi) lamukelwa futhi lenziwe ngokwezifiso ilebula lakho lomkhiqizo, ithegi, amaphakheji ayatholakala. Sake zithunyelwa ngaphezu kwamakhulu amaklayenti avela emazweni angaphezu kwama-30 ahlukene; kanti inani lonyaka lokuthekelisa lifike ku- $ 100 million; Sakha ubudlelwano obuhle namakhasimende ethu anamagama anjengeCarrefour Group kanye neTwo Farms Inc neCalk Group nokunye.
Noma ukhetha umkhiqizo wamanje kukhathalogi yethu noma ufuna usizo lobunjiniyela lohlelo lwakho lokusebenza, ungakhuluma nesikhungo sethu samakhasimende mayelana nezidingo zakho zokuthola ulwazi. Samukela ngemfudumalo amakhasimende ukusungula ukubambisana nokwakha ikusasa eliqhakazile nathi ndawonye.
Ikhwalithi ephezulu futhi esebenza kahle kakhulu
Le nkampani inikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngentengo yokuncintisana neqembu lokuthengisa eliqeqeshiwe; Kunikezelwe ekulawulweni kwekhwalithi eqinile nokusebenza kwamakhasimende okucabangayo, abasebenzi bethu abanolwazi (cishe i-pepole eyi-100) namaqembu wokuthengisa abangochwepheshe (cishe i-pepole eyi-10) ahlala etholakala ukuxoxa ngezidingo zakho nokuqinisekisa ukwaneliseka okugcwele kwamakhasimende.
Eminyakeni yamuva nje, inkampani yethu yethule uchungechunge lwemishini esezingeni eliphakeme kufaka phakathi i-Sewing Machine, i-Iron Machine ne-Printing Machine.
Ngaphezu kwalokho, Imikhiqizo yethu ingahlangana
Finyelela amazinga we-Azo Free ne-Low Cadmium futhi sithole i-BSCI Certified.
Amaklayenti Emhlabeni Wonke
I-China, i-USA, iCanada, iFrance, i-UK, iPhilippines, iQatar, iGhana, iNigeria, iNingizimu Afrika
Injongo: Ukwakha Umkhiqizo Wakho
Amanani ayisisekelo: Ukuxhumana okuningi, Thembana, nabahlinzeki ngesimo sokuwina.